कल्पना ‘परी झरना’को | राजेन्द्रमान डंगोल
कल्पना ‘परी झरना’को
नियात्रा राजेन्द्रमान डंगोल June 24, 2020, 10:03 pm
‘दिस इज द ग्रेट मोमेन्ट अफ माई लाइफ !’
कोतोबाट बिहान आठ बजे मेताका लागि पाइला उठाउनु अघि सेल्फी लिँदै फिलिप डेभोसले भने ।
प्रसन्न मुद्रामा देखिन्थे उनी ।
गोरो वर्णका मान्छेहरू आफैँमा उज्याला । त्यसमाथि पनि खुसी फक्रँदा त झनै उज्यालो देखिने, छ्याङ्ङ खुलेको हिमालजस्तै ।
उनले अगाडि भने– ‘नार–फु वाज माई ड्रिम डेस्टिनेसन । आइ ह्याड बिन लुकिङ फर दिस सिन्स अ लङ ब्याक । लेट्स स्टार्ट द जर्नी !’
२,६०० मिटरबाट उठाएको पाइलालाई ३,५७० मिटरको उचाइमा पुगेर बिसाउनु थियो । दूरीमात्र पन्ध्र कि. मि. । उकालो र ओरालो, अनगिन्ती पच्याङ र घुम्ती, छङछुर भीर, उबडखाबड खोँच र घना जङ्गलहरू पार गर्नुपर्ने ।
मनमा लागिरहेको छ– ‘खुट्टामा नील परे पर्र्ला, झ्याउरेमा ननाची छोड्दिनँ’ भनेझैँ बरु खिइयोस् मेरा जुत्ताका तलुवा, उठून खुट्टाभरि ठेला तर मेतासम्म मात्र त के, पूरै यात्रा सफल नबनाई छोड्दिनँे ।
पहाडको काँध हो– मेता । र, भिरालो थली पनि ।
“मेथा’ बाट मेता भएको रे । स्थानीय भाषामा ‘मे’ भनेको ‘बाँस’ र ‘था’ भनेको ‘भिरालो पाखा’ रहेछ । पहिले त बाँस घारी थियो रे यहाँ । पहिलेदेखि नै यो ठाउँमा गाईवस्तु चराउने र हिउँदभरिका लागि गोठ राख्ने गरिन्थ्यो । नार–फु पदमार्ग सञ्चालनमा आएपछि होटलहरू बन्न थाले ।” एक जानकारले बताए मलाई ।
ओखरलाई तिब्बती भाषामा ‘ताको’ र स्थानीय गुरुङ भाषामा ‘कुत’ु भनिँदो रहेछ । ‘कुतु’ धेरै फल्ने भएकोले ठाउँको नाम पनि कुतु राखियो रे । अपभं्रश भएर कोतो भएछ ।’ कोतोका होटल व्यवसायी छिरिङले भनेका थिए ।
चारैतिर भीमकाय पहाडका दिवार । खोँचकोे बस्ती । बिहान झुल्केको घामलाई दिन नढल्किँदै अन्नपूर्ण शृङखलाले छेकेपछि फेरि घामको मुख हेर्न अर्कोे बिहान कुर्नुपर्ने । अन्नपूर्णको छायाँ परिरहन्छ कोतोमा । बिहानको झुल्के घाममा रमाउँदै ऊर्जा सँगालेथ्यौँ हामीले ।
अन्नपूर्ण चक्रीयमार्गसँग त बीसौँ वर्ष पुरानो नाता थियो मेरो । र, पनि पहिलो पटक पदार्पण गर्दै थिएँ नारपाभूमिमा ।
कोतोको प्रहरीचौकीमा नाम दर्ता गराएर पाइला सार्नेबित्तिकै आयो मस्र्याङ्दी नदी । नार–फु क्षेत्र र अन्नपूर्ण चक्रीयमार्गको साँध ।
तिब्बती भाषामा ‘म्हरस्यो’को अर्थ हुन्छ– विधवा ।
“उतिबेलाको कुरा हो, चामेमा एउटी विधवा नारी बस्थिन् रे । बसाइँसराइको क्रममा बोन गुुरुहरूले त्यहीँ नजिक आएर धनु काँडको पुल राखी दक्षिणतर्फ जाने बाटो बनाएका थिए रे । पुल कहाँ बनाएको छ भन्दा ‘म्हरस्योको दी’ अर्थात् ‘विधवाको घर नजिक’ भन्दाभन्दै मस्र्याङ्दी भएछ ।” एक जानकारले भनेका थिए ।
मस्र्याङ्दीकै अर्को नाम हो– कर्मदा ।
स्वच्छता उस्तै, जवानी उस्तै र लय उस्तै कर्मदाको । बीसको उन्नाईस हुँदैन कहिल्यै । हिमाल हाँसिरहेसम्म जवानी कहिल्यै ढल्दैन तर जति बेगिए पनि त्रिशूलीसम्म मात्र हो कर्मदाको गन्तव्य । त्यसपछि बिटुलिन्छे, यति सङ्लो जवानी बोकेकी कर्मदा । यात्रा छोटो छ बिचरी कर्मदाको । झोलुङ्गे पुलको बीचमा पुगेर एकछिनसम्म कर्मदाको धुन सुनिरहेँ मैले । यात्राको पहिलोे सेतु थियो त्यो । कर्मदाले सिर्जेको कर्णप्रिय धुन ठोक्किँदै थियो कानमा । एकाग्र थिएँ म त्यो धुनमा ।
गल, छिनो र घनले फोर्दै थिए चट्टानका छाती र छिचोल्दै थिए अजङ्गका पहरा श्रमिक दाजु–भाइहरू ।
एकछिन टक्क रोकिएँ म ।
अक्करेभीरमा सडक बनाउने कर्मठ हातहरूलाई मनले नमन गर्दै सोधेँ–
“सडक खन्दै हुनुहुन्छ ?”
“कहाँसम्मको सडक ?”
भाषा सुन्दा उनीहरू जुम्लाका हुन् कि जस्तो लाग्यो ।
सोधे, “तपाईंहरू जुम्लाको हो ?”
जुम्लामा कहाँ हो घर ?
हमी सिँजाका र्हौँ ।
नेपाली भाषाको उद्गम भन्ने याद आयो ‘जुम्ला’ भन्ने बित्तिकै । फेरि सिँजा सभ्यताको पनि छुट्टै महङ्खव रहेको छ नेपाली समाजमा ।
अति मिहिनेती हुन्छन् जुम्लीहरू । कतिपय त घुमन्ते व्यापारीका रूपमा समेत चिनिन्छन् । कोही हिङ, शिलाजित लगायतका ओखती बेच्छन् । कोही राडीपाखी, सतरन्जा र गलैँचा । तिनै जुम्लीहरू मनाङको खोँचमा पसिना चुहाउँदै छन् यतिखेर । उनीहरूले पसिना चुहाइदिएपछि ठेकेदारको नाफा पक्का । रोजगारीका लागि आएका उनीहरू बाटो बनाउँछन् र फर्किहाल्छन् । भोलि यो बाटोमा चारपाङ्ग्रे मोटर गाडीको साम्राज्य चलाउने त अरू नै हुन् । गरिब र निमुखाको मर्म गाउँदै हिँड्ने जनवादी गायक स्व. खुशीराम पाख्रिनको गीत गुन्गुनाएँ मैले–
‘गैँची बेल्चा उचालेर
ठेकेदारले पैसा कमायो
अर्कैले ट्याक्सी गुडायो........’
पाख्रिन जसले मान्छेमा चेतना भर्थे । गीत गाएरै रगत उमालिदिन्थे । सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध लड्न पे्ररित गर्थे । यस्तै गीत गाउँदागाउँदै समाप्त भएथ्यो उनको इहलीला । पाख्रिनको यो गीत सुन्दा, उनी आफैँले बाँचेको जिन्दगी र अहिलेको राजनीति देख्दा लोकतन्त्रको सुविधाभोग ठेकेदारले नै गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
क्याङसम्म सडक पुगेपछि नार–फु क्षेत्रको पदयात्रा अवधि दुई दिन त घट्छ नै । अझ नार र फुसम्मै पुगे त पदयात्रा गर्नै परेन । दुर्गमता मेटेर सुगमता कोरिदिने थियोे यी विकट बस्तीहरूमा । विकास हो, रोक्न त मिल्दैन तर यहाँका जङ्गली जनावर, पन्छी र वातावरणमा भने के असर पर्ला ! फेरि ‘द लस्ट भ्याली अफ नेपाल’ भनेर चिनिएको मनाङको नार–फुलाई सडकसँगै भित्रिने आधुनिकताले छोएपछि पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा रहेको यहाँको पृथक संस्कृति र परम्परा अक्षुण्ण रहिरहला त ? तर्कनाका तरङ्ग उठ्दै थिए मनमा ।
कर्मदा पार गरेपछि आयो नारखोला । बगिरहेकी थिई कर्मदाकै जस्तो बैँस बोकेर, उस्तै गति र लयमा ।
पुल तर्ने बित्तिकै नारखोला देब्रे पर्न जान्छ । सल्लाका पातहरू छेडेर कलिला घामका किरणहरू बाटोसम्म आइपुगेका छन् । उचाइ लिँदै थियौँ हामीहरू, नारखोलाको गुलाबी उमेर नियाँल्दै । कलिलो घाममा हिँड्नको मज्जा नै छुट्टै । पृष्ठभूमिमा गुञ्जिरहेको थियो खोलाको धुन र चराचुरूङ्गीले गाएको मधुर गीत ।
नारखोलाले भनिरहेझैँ लाग्थ्यो– ‘ठीक समयमा नार–फु आएका छौ तिमीहरू । रमाऊ यो शान्त प्रकृतिमा ।’
गत साल अपि हिमाल ट्रेकिङको सिलसिलामा चमेलिया नदीको किनारकिनारै हिँँड्दा खाइकोटदेखि दोमलसम्मको बाटोको याद आइरहेछ यतिखेर । जङ्गल उस्तै; पदमार्गको भिरालोपन उस्तै । पदयात्रा गर्नु भनेको रूपान्तरण गर्नु रहेछ, प्राकृतिक रङहरूमा स्वयम्लाई । त्यस्तै लाग्थ्यो नारखोलाको किनारमा पाइला चाल्दै गर्दा । कुतुको छहारी ओढ्दै हिँड्नुको चरम आनन्द आइरहेको थियो । अगोचर कीटपतङ्गको क्षीण आवाजसँगै गाएथेँ । उठाएथेँ पाइला, रङ्गीबिरङ्गी पुतलीको स्वाधीन चालसँगै । आह्लादित थिएँ म, स्वप्निल संसारमा स्वयम्लाई पाउँदा ।
बाटोको डिलमै देखिए, उन्मुक्त जीवन बाँचिरहेका एकजोडी लङ्गुर । नहेरी रहन किन पो सकिन्थ्यो र तिनीहरूको चर्तिकला । क्या जिन्दगी बाँदरहरूको ! क्या विशुद्ध प्रेम ! यसरी नै बाँच्न सिकाएको छ यिनलाई प्रकृतिले । बाँच्नु मात्र पर्छ, केके देख्नुपर्छ केके ! सायद फिलिपले पनि देखे होलान् त्यो दृश्य । साँच्चै, यिनीहरूको बीचमा बिछोड हुन्छ कि हुँदैन होला है ? आफैँसित सोधेथेँ मैले ।
अगाडि थिए– फिलिप र उनका छोरा म्याक्सिम । बाउ–छोराकै खाइलाग्दो ज्यान र लामालामा खुट्टा । लमकलमक लस्किरहेका थिए उनीहरू हात्ती लस्केझैँ । उनीहरूको एक पाइला बराबर हाम्रो दुई पाइला भएपछि सँगै हिँड्न सक्ने कुरै भएन । नेपालमा पदयात्रा गर्ने सपना पूरा गर्दैगरेका ती बाउ–छोराका उत्साह र उमङ्गका पाइलाहरूलाई भेट्न मेरो बुताले भ्याएन । यही वर्षको जुलाईमा तीन दिने पञ्चासे ट्रेकिङ गरेदेखि यता उकालोको मुख देखेको थिइनँ मैले । बोसो लागेर होला, लाटिएछ ज्यान मज्जैले । बा’ले भन्नुभएको कुरा सम्झेँ– ‘ज्यानलाई धेरै सुख दिनुहुँदैन ।’ बसीबसी खाएको निस्कँदै थियो । ज्यान तात्न थालेपछि तपतपी चुहिँदै थियो बोसो, पसिना बनेर ।
उनीहरूसँगसँगै थिए राम तामाङ पिठ्यूँमा तीस किलोको बोझ बोकेका । धन्न इज्जत धानिदिएका छन् उनले । नत्र पाहुना अघिअघि, हामी पथप्रदर्शक चाहिँ पछिपछि । देख्नेले पनि के भन्दा हुन् ! योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुनु र ! भर्खरै ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’मा पैँतालीस दिनको भारी खेपेका उनी नार–फुमा दश दिनको लागि थाप्लो कुच्याउँदै थिए । तैपनि कम स्फूर्ति थिएन उनमा । हो, साँच्चै ज्यान त यस्तो पो हुनुपर्छ । जति हिँड्यो त्यति नै फुर्तिलो बन्ने । लाग्यो– सही हो रहेछ बा’को कुरा ।
पछाडि थिए जयनाथ भण्डारी आफ्नै तालमा ।
बडो आनन्द हुन्छ एक्लै हिँड्नुमा पनि । प्रकृतिसँग सम्वाद गर्दै हिँड्नुको मज्जा न हो । उनी तीस वर्षदेखि निरन्तर पदयात्रा गर्दै आइरहेका अनुभवी पथप्रदर्शक र ट्रेकिङ गाइड ट्रेनर पनि । उकालो र ओरालोको यात्रा सामान्य कुरा हो उनका लागि । अन्नपूर्ण, लाङटाङ, एभरेस्ट, मनास्लु ट्रेकिङ त पानी पँधेरो हो यिनका लागि । चराप्रति विशेष मोह छ उनमा । चराप्रेमी उनी पाइलैपिच्छे दुर्बिन सोझ्याउँदै थिए चारैतिर । बिहानको कलिलो घाममा खेलिरहेका चराहरू हेर्ने राम्रो सुअवसर थियो उनका लागि ।
एक घण्टा हिँँडेपछि पहराको आडमा पुगेर पहिलो पटक ‘ब्रेक’ लिए फिलिप र म्याक्सिमले ।
“सा भा राज ?” फिलिपको प्रश्न मलाई ।
उनीहरू बेल्जियमका फ्रेन्चभाषी । “तिमीलाई कस्तो छ?” भनेर सोधेका थिए फिलिपले । काठमाडौँस्थित फ्रान्सेली साँस्कृतिक संस्थानमा सातौँ तहसम्म पढेकोले फ्रेन्च भाषा रामैै्र बुझ्छु म । भाषामध्येको मीठो भाषा हो यो । फ्रेन्चमै संवाद गर्न मनपर्छ मलाई पनि ।
“सा भा !” अर्थात् “ठीक छु !” फ्रेन्चमै मेरो जवाफ ।
कुरा गर्दै थियौँ हामी । टुप्लुकिए चराप्रेमी जयनाथ ।
नारखोलाले बजाइरहेकोे धुनमा हठात् स्वर खापे उनले–
‘नारखोलाको तिरतिरै जाने हो
माया पाए सँगसँगै लाने हो......’
मायाको खुँदो दलेर मनको लड्डु क्वाप्पै खाए जयले । आखिर लड्डु न हो ! खाने छुट जो–कोहीलाई पनि छ । जयलाई किन नहुनु !
प्रकृतिको मात चढेथ्यो उनलाई । प्रकृतिको विशाल ठेकीभित्र प्रकृतिकै लय र तालमा नाच्दै थिए उनी मारुनी–मदानीझैँ बनेर । यसरी नै सिर्जना गरेको भए यिनको नियात्रा मात्रै एक डोको भइसक्थ्यो होला । दुर्बिन सोझ्याउँदा सोझ्याउँदै लेखनलाई भुसुक्कै बिर्से यिनले ।
लामो समय ब्रेक लिँदा अल्छी भइन्छ भनेर धेरैबेर रोकिन्नन् फिलिप । उमेरले सत्तरीको उकालो चढिरहेका उनी जोशिला पाइला टेकिरहेका छन् पदयात्राको उकालोमा । हम्मेहम्मे परिरहेको छ उनीसँग हिँड्न हामीलाई ।
‘आँ किलोमेथ्र आ पिए सा युज, सा युज
आँ किलोमेथ्र आ पिए सा युज ले सुलिए
दु किलोमेथ्र आ पिए सा युज, सा युज
दु किलोमेथ्र आ पिए सा युज ले सुलिए ।’
बाल गीतमा गुन्गुनाए म्यक्सिम । खुब आनन्द आउँछ यो गीत सुन्दा । हिँडाइसितै सम्बन्धित छ यो । प्रायः फ्रेन्चभाषीहरू पदयात्रामा यो गीत गुन्गुनाइरहेका हुन्छन् । गीतको भाव हो– ‘एक किलोमिटरको पैदलले जुत्ताको तलुवा मात्र खियाउँछ, दुई किलोमिटरमा जुत्ता नै थोत्रिसकेको हुन्छ...........’,
गोरो वर्णको मान्छे, कुहिरो आँखा, सलक्क परेको ज्यान । कम हिस्सी छैन केटाको, सिनेमाको हिरोजस्तै । फेन्च लवज आउँछ अग्रेजीमा । रसिक छन्, उनन्तीस वर्षीय म्याक्सिम । बोलिरहनुपर्ने, हँसाइरहनुपर्ने र हाँसिरहनु पर्ने । यस्तै मान्छे मन पर्छ मलाई पनि ।
बाटोमा प्लास्टिक, खैनी, चकलेट र चुरोटका खोलहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । म्याक्सिम ती सबलाई उठाउँछन् । प्लास्टिकको थैलोमा कोच्दै भन्छन्– “फोहर त म देख्नै सक्दिनँ ।”
सचेत छन् उनी वातावरणप्रति । फोहरको सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कस्तो राम्रो सोच ! देश हाम्रो, पर्यावरण हाम्रो तर माया हामीलाई भन्दा उनलाई बढी । पदयात्रासँगै स्वयम्सेवा पनि गरिरहेका छन् उनी ।
उनी हातले फोहर टिप्दै मुखले प्रश्न तेस्र्याउँछन्– “ट्रेकिङ ट्रेल किन यति धेरै फोहर ? कसले फाल्छ यी सब ? यसले पदमार्गको शोभा दिँदैन ।”
प्रश्न जति समान्य छ यसको जवाफ दिनु त्यत्तिकै कठिन हुन्छ । मलाई थाहा छ, यो गरेको त नेपालीहरूले नै हो । तर कसरी भन्ने ? ’आङ कन्याएर छारो उडाउनु’ भनेजस्तै । तैपनि सकसपूर्ण रूपमा जवाफ दिन्छु– “यहाँ धेरै मान्छेहरू हिँड्छन् । कसले फाल्छन् पत्तै हुँदैन ।”
उनले केही चाउचाउको खोललाई नियाँल्दै भने– “ओ ! मेड इन कोरिया ! इट मस्ट बि थ्रोन बाई द कोरियन्स । ह्वाट ननसेन्स टुरिस्ट्स ।”
‘मेड इन कोरिया’ लेखिनुको अर्थ कोरियनहरूले नै फालेको भन्ने हुँदैन । कोरियनहरूले नेपालीलाई दिन्छन् र खाएपछि व्यवस्थापन गर्न जान्दैनन् । यही थियो वास्तविकता । यस्तो कुरा म्याक्सिमलाई के थाहा ! निःशब्द थिएँ म, उनले त्यसो भन्दा । पर्यटकहरू त वातावरणप्रति सचेत हुन्छन् नि । नहुने त हामी नै हो ।
पर्यटन क्षेत्रमा लागेर पदयात्रा व्यवसाय सुरु भएको चौध वर्ष भइसक्यो । कम्तीमा ठाउँठाउँमा ‘ट्रयास बिन’ राखिदिए यति धेरै फोहर हुँदैनथ्यो कि ! मनमनै गुन्छु म ।
अचेल सगरमाथा क्षेत्रमा ‘क्यारी मी ब्याक’को अवधारणा आएको छ । त्यो पनि स्वीडेनी नागरिकले ल्याइदिएको । नाम्चेबाट स्याङ्बोचे भ्यू प्वइन्ट जाने बाटोमा बसेर पदयात्रीहरूलाई ती विदेशी नागरिक आफैँले ब्रिफिङ गर्छन् र नाम्चेमा सङ्कलन गरेर पोकापोका बनाइएको फोहरलाई लुक्लासम्म लगिदिन अनुरोध गर्छन् ।
नार–फु पदयात्राका लागि प्रतिपर्यटक सय डलर असुल्छ सरकार । रु. तीनहजार तिर्नुपर्छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना(एक्याप)लाई । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)लाई तिर्नुपर्ने रु. एक हजार त छँदै छ । तैपनि ठाउँठाउँमा ‘ट्रयास बिन’ राख्नुपर्ने आवश्यकता कसैले देख्दैनन् । जे कुरा पनि विदेशीकै भर पर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !
“ए. ए... ए.... ! अगाडिको एकैछिन रोकिनू त ! म अलिकति देबे्र फेरो लिन्छु ।”
फलामे तारको लठ्ठा बोकेर उकालो लाग्दै थिए सत्र भाइ । सबैभन्दा पछिल्लोको आवाज थियो त्यो । सय मिटर लामो लठ्ठालाई दोबारेर दुबैपट्टि काठको डन्डी बाँधी टाउकोमा नाम्लो लगाएर बोकिरहेका छन् उनीहरू । खुबै संयमता अपनाउनु पर्छ उकालो एवम् घुमाउरो बाटोमा । अन्यथा लड्ने सम्भावना हुन्छ । थर्थरी काँपिरहेका थिए उनीहरूका पयर । तैपनि सम्हालेका थिए– आफैँले आफैँलाई ।
मैले पुछारको जवानसँग सम्वाद गरेँ–
“कहाँ लाँ’दै हुनुहन्छ यो लठ्ठा ?”
“फु गाउँमा पुल बनाउन ।”
“कति लामो छ यो ?”
“सय मिटर ।
“तपाईंहरू फुकै बासिन्दा हो ?”
उनीहरू कोही धादिङ र कोही गोरखाका ।
कहाँका मान्छे कहाँ आएर पसिना चुहाइरहेका छन् । जीवनको नियति न हो । स्वाभाविक लाग्छ, उनीहरूले चुहाएको पसिना देख्दा । रोजगारीको लागि घरपरिवारबाट टाढिनुको पीडा महसुस गर्न सकिन्छ । उनीहरूले पसिना चुहाइदिए फुबासीले पुल तर्न पाउँछन् । सोच्छु– अरूले तर्ने पुलको लठ्ठा बोक्दाबोक्दै जीवन खिइँदै छ उनीहरूको मानौँ, तुरिँदै गएको चरोटको ठुटाजस्तै । सुख र समृद्धिका सपनाहरू त उनीहरूका पनि होलान् नि ! सायद पसिनासँगसँगै बगिरहेछन् समृद्धिका सपना ।
ती जवानहरूलाई उछिन्यौँ हामीले ।
दश बजेको थियो, छ्याछ्याको नेचरल रेस्टुरेन्ट एन्ड लजमा पुग्दा । पारिलो घाम ताप्दै चिया पिउने कुरामा सहमति भयो हाम्रो ।
चारवर्षको छोरो काँधमा हालेर आइपुगे अघिल्लो साँझ कोतोको होटलमा भेटिएका मनोज तामाङ । साथमा थिइन् उनकी श्रीमती सोनाम चिची । उनीहरू फुका बासिन्दा ।
अघिल्लो साँझ डाइनिङ हलमा बसेर आगो ताप्दै गर्दा मनोजले बेलीबिस्तार लगाएका थिए– “दश वर्षअघि कामको खोजीमा म पूर्व हिलेबाट एकजना दाजुसँगै फु आएको थिएँ । काम गर्दै जाँदा सोनामसित माया बसेपछि यो ठाउँ छाड्नै मन लागेन । विवाह ग¥यौँ । जायजन्म पनि भयो । बाबु–आमा उतै छन् । मचाहिँ फुको बासिन्दा भएको छु ।”
माया भन्ने चिज नै यस्तै ! अचम्मकै रसायन । पूर्व र पश्चिमका मान्छेहरूलाई जोड्न सक्ने । समर्पण छ मनोजको प्रेममा । उनी भन्थे– “ठूलै सङ्घर्ष गरेका छौँ हामीले आजको दिनसम्म आइपुग्न । अलिखित भएर मात्र हो कहानी लेख्ने हो भने त हाम्रो प्रेम लैला–मजनु र मुना–मदनको भन्दा कम चानचुने छैन ।”
मामा–चेला, फुपू–चेला चल्ने ठाउँहरूमा छोरीको हकदार कोही अरू नै हुन्छन् । यस्तो संस्कार भएको ठाउँमा टाढाको मान्छे आएर केटी पट्याउनु सजिलो त पक्कै होइन ।
“अब यो सूचीमा मनोज–सोनाम पनि थपिएको छ ।” मैले भनेँ ।
“खाना पनि खाएर जानुस् दाइ । उता छाम्जीमा त बाह्र नबजी घाम आउँदैन ।” रेस्टुरेन्टकी साहुनी भन्दै थिइन् ।
उनको कुरा मानेनौँ हामीले ।
लाग्यौँ छाम्जीतर्फ ।
साँच्चै हो रहेछ । साढे एघार बज्दासम्म पनि पहाडको ओझेलमै थियो छाम्जी ।
किचनमा व्यस्त थिइन् एउटी महिला । चुलो नजिकै थिए एकजना पाको मानिस । मालिक भन्ठानेका थिएँ । होइन रहेछन् । उनको नाम रहेछ च्याङ्बा ।
खाना पाकुन्जेल उनीसित कुराकानी भयो मेरो–
“च्याङ्बा दाइको घरचाहिँ कहाँ हो नि ?”
“धादिङको रि भन्ने ठाउँमा ।”
“कति भयो यता बसेको ? ”
“बीस वर्षको थ्यो म । बाउ–आमासित ह्याँ आयो । उनेरू नुन लिन भोट गयो । फर्केन । अनि म यतै बस्यो नि ! ”
“के काम गर्नुहुन्छ ? ”
“साहुको घर बनाउने सामान र खानेकुरा बोक्ने । ”
“कति वर्षको हुनु भयो त ? ”
“साठी भयो नि । पहिलैदेखि पैसाको मया गारेन । ब्या पनि गारेन । आहिले बूढो भायो । आबु त भारी पनि बोक्न साक्तैन । एक्लो जीवन बिताइरा’छा ।”
मान्छेपिच्छेका आ–आफ्नै पीडा । पीडालाई लुकाउन नसकेको यथार्थ झल्किन्थ्यो उनको अनुहारमा । अहिले त जसोतसो भाँडा माझेरै खाइरहेका छन् । उनको बुढ्यौलीका दिनहरू कस्ता होलान् । चिन्ताले भतक्क पोल्यो मेरो मन । ‘बिचरा’ भन्नुबाहेकको अरु के नै गर्न सक्थेँ र म !
आखिर एक घण्टा लाग्ने रहेछ खाना तयार हुन । त्यतिखेरसम्म त भोक पनि लागिसकेको हुन्थ्यो । छ्याछ्यामा भए पारिलो घाममा बसेर खान पाइन्थ्यो । थ्री सिस्टर रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर छाम्जी छाड्नु र घामले मुख देखाउनु एकैचोटि पो भयो ।
फेरि लाग्यौँ नारखोलाको किनारैकिनार ।
अझै साढे तीन घण्टा हिँड्नु छ, एउटा उकालो र अर्को कठिन उकालो । ठाउँठाउँमा चट्टान कोपेर बनाइएको छ बाटो । हुलाकी ओडारदेखि धर्मशालासम्मको सवा घण्टाको बाटो सजिलो र दृश्यहरू अति नै मनोरम ।
अगाडि आए खैरा पहाडका शृङखला । छमछमी नाचिरहेका लुङ्दरहरू ।
फेरि आए हिउँको डाम बसेका काला र निला निर्जीव पहाडहरू । हिउँकोे सिन्दुर भरिएका छन् अचेल तिनका सिउँदामा । तल हरियालीसहितको सौन्दर्य, माथि हरियालीबिनाको सौन्दर्य । हरियाली भएपनि उजाड भएपनि प्रकृति आफैँमा सुन्दर हुँदोरहेछ । प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम खानीमा थियौँ हामी । आहा ! धूपी र सल्लाको क्या मधुर वासना !
बाटैमा छङ्छङिरहेको छ– रुप्सिलो छहरा । पहरामा छहराको दृश्य ! देख्दा अप्सराहरूको हुल लामबद्ध भएर पहाड ओर्लेझैँ लाग्ने । लठ्ठै पर्छु म । आफैँलाई प्रश्न गर्छु– तर किन उपयोगिता लिन सकिरहेका छैनौँ हामीले यति सुन्दर झरनाकोे ?
सिक्किमको ग्यान्टोक नजिकैको एउटा धमिलो पानीको झरनालाई उनीहरूले ‘वनझाँक्री फल’ नाम दिए । थप आकर्षक बनाए झरनालाई परिमार्जन गरेर । वनझाँक्रीको आकृति बनाए दुई थान । पोखरी बनाए । चार थान मनुमेन्ट बनाए । पच्चीसवटा पसल बनाए । आज दिनहुँ दशौँ हजारको संख्यामा पर्यटकहरूको घुइँचो आउँछन् ‘वनझाँक्री फल’ हेर्नकै लागि । एक करोड सतासी लाख खर्चेर बनाएको त्यो नवीन पर्यटकीय उपजले वार्षिक तीन करोड प्रतिफल दिइरहेको छ सिक्किमलाई । वनझाँक्री भन्ने त सुनिएकै कुरा हो । यही लोककथालाई धार्मिक पर्यटकीय उपजका रूपमा फाइदा लिन सके उनीहरूले । तर हामी नविन पर्यटकिय उपजको त कुरै छाडौँ, आफैँसँग भएका प्राकृतिक सम्पदालाई सदुपयोग सकेका छैनौँ न कि सम्पदा सदुपयोग गर्नसक्ने मानव संसाधन नै बनाउँन सकेका छौँ ।
के नाम हो यो कुन्नी यो झरनाको । नाम जे भएपनि यसलाई ‘परी झरना’ नामाकरण गरेर सिक्किमको ‘वनझाँक्री फल’को जस्तै मिथकीय फ्लेवर दिन सके नार–फु पदयात्राको औचित्य अझै बढ्थ्यो कि ! हिँडिरहेँ म ‘परी झरना’को कल्पना गर्दै ।
फिलिप, म्याक्सिम र राम फेरि पनि अगाडि नै । जय र म पछाडि पछाडि । उनीहरूको गतिलाई कसले रोक्नु ! मनमा लागिरहेको थियो– ‘राम नभइदिएको भए त लाजै मर्नु पो हुने रहेछ ।’
धर्मशाला काटेपछिको काठेपुल तर्नासाथ सुरु भयो कठिन उकालो ।
अन्न र पानीको शरीर कतिबेला के हुन्छ, पत्तै नहुने ! पाइला उठाउँदै गर्दा अनायासै मेरा दुबै तिघ्रामा मुस्लो बटारिन थाले, चुँडिएलाजस्तै हुनेगरी । ठानेँ– ‘उकालोमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ; एकछिनपछि त ठिक होला ।’
हुँदाहुँदा पाइला सार्नै नसकिने भो । यसै त उनीहरूभन्दा ढिलो, झन् मांसपेशीको दुखाइ । अब के हुने होला ? आज मेता पुग्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्तामा डुबेँ म ।
“दुई महिनाअघि डेङ्गी लागेर थला परेको थिएँ । कतै त्यसैको कमजोरीले त होइन ?” सहयात्री जयलाई सोधेँ मैले ।
हामी दुईले यसअघि धेरैपटक सँगै पदयात्रा गरिसकेका थियौँ तर यस्तो त कहिल्यैँ भएको थिएन । अचम्भित थिए उनी ।
उनले मेरो दुबै तिघ्राको मांसपिण्डमा बुढी औँलाले बेसरी थिचिदिए । त्यसपछि पाइला उचाल्न केही सजिलो भयो तर पन्ध्र पाइला हिँडेपछि फेरि त्यस्तै कष्ट । प्रत्येक पन्ध्रपन्ध्र पाइलामा उनले त्यसरी नै थिचिदिन्थे । एवम् रितले हिँडिरहेँ दुई घण्टाको उकालो ।
साथमा जय नभएको भए कन्तबिजोग नै हुनेरहेछ मेरो ।
अन्ततः पुगियो मृेताको डिलमा । शरीरमा भएको ताकत लगभग पूरै सकिएको भान भइरहेको थियो । तर त्यहाँ पुगेपछिको आनन्द छुट्टै ।
सामुन्नेको हरिया पहाड । त्योभन्दा पछाडिका निलिमा पोतिएका पहाडहरू । त्योभन्दा पनि पछाडिका सेता पर्वत र पर्वतीय द्वारबाट देखिन्छ निलो आकाश । नरोकिईकन सुखै पाइएन । आहा, कति सुन्दर ! कसरी गरुँ म यो दृश्यको बयान !
डिकी होटलको आँगनको डिलमा बसेर हामीतिर आँखा तान्दै थिए राम ।
साढे तीन बजेको थियो होटल पुग्दा ।
“दिस स्टिप ड्रेन्ड अल अफ माइ इनर्जी ।”
थाहा भयो, मलाईजस्तै भएको रहेछ फिलिपलाई पनि ।
उनी मलाई सोध्दै थिए– “ह्वाट अबाउट यु ?”
आफ्नो हालत बताएँ ।
समग्रमा नौ सय सत्तरी मिटरको उचाइ उक्लेका थियौँ हामी ।